အင်စတာဂရမ် ပေါ်မှ ရပ်ရ်ှဖို့ရဲ့ ရေးသားချက် အပေါ် အသိအမှတ် ပြုလိုက်တဲ့ ဒီပေး ၊ ယူနိုက်တက်ရဲ့ မှတ်တမ်းကောင်း တစ်ခုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဂရင်းဝုဒ် - SPORTS MYANMAR
အင်စတာဂရမ် ပေါ်မှ ရပ်ရ်ှဖို့ရဲ့ ရေးသားချက် အပေါ် အသိအမှတ် ပြုလိုက်တဲ့ ဒီပေး ၊ ယူနိုက်တက်ရဲ့ မှတ်တမ်းကောင်း တစ်ခုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဂရင်းဝုဒ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီနေ့ ည ( မနက်ဖြန် နံနက် 1:30 အချိန် ) မှာ ယူရို ပါလိဂ် အုပ်စု အဆင့် အဖွင့် ပွဲစဉ် အဖြစ် အက်စတာနာ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား သွား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မတိုင်မီ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ မန်ဖစ် ဒီပေး က လက်ရှိ တိုက်စစ်မှူး မားကပ်စ် ရပ်ရ်ှဖို့ ကို လူမှု ကွန်ယက် မှ တစ်ဆင့် စိတ်ဓါတ် တက်ကြွ စေခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ မားကပ်စ် ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ ယူနိုက်တက် စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ကို ယူရို ပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှ စတင် ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ အမှတ် တရ တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
2016 ခုနှစ် တုန်းက ယူရို ပါလိဂ် ပွဲစဉ် အဖြစ် ယူနိုက်တက် တို့ မစ်ဂျယ်လန်း အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မကစား မီ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် မှူး ဖြစ်သူ မာရှယ် ဟာ သွေးပူ လေ့ကျင့်ရေး လုပ်တုန်း ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ အတွက် ရပ်ရ်ှဖို့ က စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ကို စတင် ခွင့် ရရှိ ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာ ပါဝင် ကစား ခွင့် ရရှိ သွား လိုက်တဲ့ အသက် 18 နှစ် အရွယ် ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ အသင်း အတွက် ကစား ပေး ရတဲ့ စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ပွဲစဉ် မှာပဲ2ဂိုး အထိ သွင်းယူ ရင်း ပရိသတ် တွေရဲ့ နှစ်ခြိုက် မှုကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ယူနိုက်တက် ဟာ မစ်ဂျယ်လန်း ကို5– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အခုတော့ အက်စတာနာ နဲ့ ကစား ရမယ် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ကစားသမား လေးက မစ်ဂျယ်လန်းနဲ့ ကစား ခဲ့စဉ် တုန်းက စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ ပထမဆုံး သွင်းဂိုး သွင်းယူ ခဲ့စဉ် က အောင်ပွဲ ခံခဲ့ တဲ့ ပုံရိပ် ကို အမှတ်တရ အဖြစ် လူမှု ကွန်ယက် ဖြစ်တဲ့ အင်စတာဂရမ် အပေါ် တင်သွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဒါကို အဆိုပါ ည တုန်းက ရပ်ရ်ှဖို့ နည်းတူ ယူနိုက်တက် အတွက် ဂိုး သွင်းယူ ပေး ခဲ့တဲ့ လက်ရှိ လိုင်ယွန် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ မန်ဖစ် ဒီပေး က ဒီ ရက်စွဲ ကို သူလည်း အမှတ်ရ နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ် ပြု စကား ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အဲ့ဒီ အချိန် တုန်းက ယူရို ပါလိဂ် ဟာ ကျွန်တော့် အတွက် တော့ တစ်ကယ့် ကို စပါယ်ရှယ် အမှတ်တရ တွေကို ပိုင်ဆိုင် စေခဲ့ ပါတယ် ။ ပိုပြီး ကြိုးစား အလုပ် လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို ဖြစ်စေ ခဲ့ သလို အသင်း ကို ကြီးမား တဲ့ အဆင့် တစ်ခု ဆီ ရောက်ရှိ စေဖို့ တွန်းအား ဖြစ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ” လို့ ရပ်ရ်ှဖို့ က အင်စတာဂရမ် ပေါ်မှာ အမှတ်တရ တင်သွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဒါကို တွေ့မြင် လိုက် ရတဲ့ ဒီပေး က ‘ Jheeezzzz ငါ မှတ်မိတယ် ???????????? ‘ ဆိုပြီး ပြန်လည် အသိအမှတ် ပြုပေး ခဲ့ကာ အီမိုဂျီ နဲ့ အတူ အသင်းဖော် ဟောင်းကို စိတ်ဓါတ် တက်ကြွ စေခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
မစ်ဂျယ်လန်း နဲ့ ပွဲမှာ သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ သွင်းဂိုး ကြောင့် ရပ်ရ်ှဖို့ ဟာ အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ဂျော့ခ်ျ ဘက်စ် ကို ကျော်လွန် ပြီး ဥရောပ ပြိုင်ပွဲ မှာ ဂိုး သွင်းယူ နိုင် ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အသက် အငယ်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဒီနေ့ ည မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား က အကယ်ဒမီ ထွက် လူငယ် ကစားသမား လေး ဖြစ်တဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် ကို ပွဲထွက် ကစား ခွင့် ပေးသွား ဖို့ ရှိနေ ပါတယ် ။ အကယ်လို့ ဂရင်းဝုဒ် သာ ဂိုး သွင်းယူ နိုင်မယ် ဆိုရင် ရပ်ရ်ှဖို့ ရဲ့ စံချိန် ကို ကျော်ဖြတ် သွားနိုင် ပါ လိမ့်မယ် ။
အငျစတာဂရမျ ပျေါမှ ရပျရျှဖို့ရဲ့ ရေးသားခကျြ အပျေါ အသိအမှတျ ပွုလိုကျတဲ့ ဒီပေး ၊ ယူနိုကျတကျရဲ့ မှတျတမျးကောငျး တဈခုကို သိမျးပိုကျနိုငျခှငျ့ ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ ဂရငျးဝုဒျ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီနေ့ ည ( မနကျဖွနျ နံနကျ 1:30 အခြိနျ ) မှာ ယူရို ပါလိဂျ အုပျစု အဆငျ့ အဖှငျ့ ပှဲစဉျ အဖွဈ အကျစတာနာ အသငျး နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား သှား ရဖို့ ရှိနေ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မတိုငျမီ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ မနျဖဈ ဒီပေး က လကျရှိ တိုကျစဈမှူး မားကပျဈ ရပျရျှဖို့ ကို လူမှု ကှနျယကျ မှ တဈဆငျ့ စိတျဓါတျ တကျကွှ စခေဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဖွဈသူ မားကပျဈ ရပျရျှဖို့ ဟာ ယူနိုကျတကျ စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ကို ယူရို ပါလိဂျ ပွိုငျပှဲ မှ စတငျ ခဲ့သူ ဖွဈပွီး တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ လှတဲ့ အမှတျ တရ တှကေို ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ သူပဲ ဖွဈပါတယျ ။
2016 ခုနှဈ တုနျးက ယူရို ပါလိဂျ ပှဲစဉျ အဖွဈ ယူနိုကျတကျ တို့ မဈဂယျြလနျး အသငျး နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ရ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ပှဲစဉျ မကစား မီ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ မှူး ဖွဈသူ မာရှယျ ဟာ သှေးပူ လကေ့ငျြ့ရေး လုပျတုနျး ဒဏျရာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ အတှကျ ရပျရျှဖို့ က စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ကို စတငျ ခှငျ့ ရရှိ ခဲ့တာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာ ပါဝငျ ကစား ခှငျ့ ရရှိ သှား လိုကျတဲ့ အသကျ 18 နှဈ အရှယျ ရပျရျှဖို့ ဟာ အသငျး အတှကျ ကစား ပေး ရတဲ့ စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ပှဲစဉျ မှာပဲ2ဂိုး အထိ သှငျးယူ ရငျး ပရိသတျ တှရေဲ့ နှဈခွိုကျ မှုကို သိမျးပိုကျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ အဆိုပါ ပှဲစဉျ မှာတော့ ယူနိုကျတကျ ဟာ မဈဂယျြလနျး ကို5– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ အနိုငျယူ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အခုတော့ အကျစတာနာ နဲ့ ကစား ရမယျ ပှဲစဉျ မတိုငျမီ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ ကစားသမား လေးက မဈဂယျြလနျးနဲ့ ကစား ခဲ့စဉျ တုနျးက စီနီယာ ကစားသမား ဘဝ ရဲ့ ပထမဆုံး သှငျးဂိုး သှငျးယူ ခဲ့စဉျ က အောငျပှဲ ခံခဲ့ တဲ့ ပုံရိပျ ကို အမှတျတရ အဖွဈ လူမှု ကှနျယကျ ဖွဈတဲ့ အငျစတာဂရမျ အပျေါ တငျသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါကို အဆိုပါ ည တုနျးက ရပျရျှဖို့ နညျးတူ ယူနိုကျတကျ အတှကျ ဂိုး သှငျးယူ ပေး ခဲ့တဲ့ လကျရှိ လိုငျယှနျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ မနျဖဈ ဒီပေး က ဒီ ရကျစှဲ ကို သူလညျး အမှတျရ နဆေဲ ဖွဈကွောငျး အသိအမှတျ ပွု စကား ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အဲ့ဒီ အခြိနျ တုနျးက ယူရို ပါလိဂျ ဟာ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ တော့ တဈကယျ့ ကို စပါယျရှယျ အမှတျတရ တှကေို ပိုငျဆိုငျ စခေဲ့ ပါတယျ ။ ပိုပွီး ကွိုးစား အလုပျ လုပျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြ တှကေို ဖွဈစေ ခဲ့ သလို အသငျး ကို ကွီးမား တဲ့ အဆငျ့ တဈခု ဆီ ရောကျရှိ စဖေို့ တှနျးအား ဖွဈစေ ခဲ့ ပါတယျ ” လို့ ရပျရျှဖို့ က အငျစတာဂရမျ ပျေါမှာ အမှတျတရ တငျသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါကို တှမွေ့ငျ လိုကျ ရတဲ့ ဒီပေး က ‘ Jheeezzzz ငါ မှတျမိတယျ ???????????? ‘ ဆိုပွီး ပွနျလညျ အသိအမှတျ ပွုပေး ခဲ့ကာ အီမိုဂြီ နဲ့ အတူ အသငျးဖျော ဟောငျးကို စိတျဓါတျ တကျကွှ စခေဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
မဈဂယျြလနျး နဲ့ ပှဲမှာ သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ သှငျးဂိုး ကွောငျ့ ရပျရျှဖို့ ဟာ အသငျး ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ ဂြော့ချြ ဘကျဈ ကို ကြျောလှနျ ပွီး ဥရောပ ပွိုငျပှဲ မှာ ဂိုး သှငျးယူ နိုငျ ခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အသကျ အငယျဆုံး ကစားသမား ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ဒီနေ့ ည မှာတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖွဈသူ အိုလီ ဂနျနား ဆိုးလျရှား က အကယျဒမီ ထှကျ လူငယျ ကစားသမား လေး ဖွဈတဲ့ မာဆှနျ ဂရငျးဝုဒျ ကို ပှဲထှကျ ကစား ခှငျ့ ပေးသှား ဖို့ ရှိနေ ပါတယျ ။ အကယျလို့ ဂရငျးဝုဒျ သာ ဂိုး သှငျးယူ နိုငျမယျ ဆိုရငျ ရပျရျှဖို့ ရဲ့ စံခြိနျ ကို ကြျောဖွတျ သှားနိုငျ ပါ လိမျ့မယျ ။